Zifa Inoti Hapana Dzokashure Pana Muzvare Rushwaya
Gweta riri kumirira Zifa rinoti rasangana neChitatu negweta revaimbove Chief Executive vesangano iri, Muzvare Henrietta Rushwaya, Va Selby Hwacho, avo vakapa chikumbiro chekuti nyaya yekudzingwa basa kwaMuzvare Rushwaya, izeyiwe pamberi pa Labour Relations Officer.
Nyaya iyi yanga ichifanirwa kuzeiwa neChitatu, asi gweta reZifa, VaRalph Maganga, rakumbira kuti nyaya iyi ipinde mudare neChishanu, kuitira kuti gweta guru reZifa panyaya iyi, iro ranzi ranga rakabatikana.
Gweta raMuzvare Rushwaya, VaHwacha, vanonzi vakati dare rakanzwa nyaya yaMuzvare Rushwaya neChipiri, haraifanirwa kunge rakanzwa nyaya iyi, sezvo izvi zvichifanirwa kutanga zvasvitswa pamberi paLabour Relations Officer.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaHwacha, kanawo Muzvare Rushwaya.
Zifa yakadzinga Muzvare Rushwaya neChipiri ichiti vakabatwa nemhosva yekuendesa chikwata chemaWarriors neMonomotapa kunotamba bhora nezvikwata zveku Asia zvisiri pamutemo, uye zvisina kutsigirwa neSports and Recreation Commission.
Zifa inotiwo Muzvare Rushwaya vakakwereta mari kuSports and Recreation Commission zvakanga zvisina kutsigirwa nebhodhi yaro, uye hapana ari kuziva kuti mari iyi yakashandiswa pakuita chii.
Nyaya yekunze Muzvare Rushwaya vane chekuita nehuori mukutengeswa kwemitambo yeZimbabwe Warriors kuThailand neMalaysia, haisati yapera kutongwa.